मिस नेपाल हिट हुने शुभेच्छाको आसा Feb 13, 2014 06:57
नारी प्रधान चलचित्र मिस नेपाल निर्माण गरेकी नायीका शुभेच्छा थापा अहिले सोही चलचित्रको प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छिन् । चलचित्र पब्लीसिटिका क्रममा सार्वजानिक भएका केही पोष्टहरु विवादमा आए । सोही विषयमा नायीका तथा निर्मात्री शुभेच्छासंग गरिएको कुराकानी ।
मिस नेपाल कस्तो खालको चलचित्र हो ?
मिस नेपाल एउटा नारी प्रधान चलचित्र हो । मिस नेपालको अर्थ के हो ?, असली मिस नेपाल कसलाई भन्ने ?, मिस नेपालको उपाधी कसले पाउनुपर्ने हो ? मिस नेपाल हुने क्षमता के हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित चलचित्र हो । एउटा गाउंमा रहेकी पढेलेखेकि युवतिसंग पनि मिस नेपाल हुन सक्ने क्षमता हुन्छ । तर यहां मिस नेपाल भन्ने शब्द र त्यस उपाधीलाई अस्पष्ट रुपमा व्यख्या गरेको पाइन्छ अनि त्यसलाई खाली शहरकेन्द्रित गरिएको देखिन्छ । त्यही कुरालाई उजागर गर्न खोजिएको छ मिस नेपालबाट । मिस नेपालमा विमल गौतम दाईद्धारा अंग्रेजीमा सवटाइटल पनि गरिएको छ ।
तर तपाईको पोष्टर त अपाच्य भयो भन्दै निकै विवादमा आयो नि ?
नेपाली समाजलाई पाच्य हुने खालको पोष्टर डिजाइन सुरुमा मैले सार्वजानिक गरेको थिंए । मैले ट्रायलका लागि डिजाइन गरेको पोष्टरहरु पछि पब्लिसिटिका लागि सार्वजानिक गरें । सेन्सरमा समस्या आएपछि त्यसलाई हटाइसकिएको छ ।
तपाईको एउटा पोष्टर जहां तपाईले माछाले आफ्नो स्तन ढाक्नुभाको छ, त्यसको संकेत के हो ? किन त्यस्तो गर्नुभाको ?
त्यो मिस नेपालको प्रचारको लागि गरिएको फोटोसुट हैन । त्यो एक्स्ट्रा फोटोसुट हो । केही नयांपन दिउं भनेर मात्र गरेको हुं ।
मिस नेपालमा चाहिं तपाइको भुमिका कस्तो छ ?
मेरो ८ वर्षको भूमिकाबाट कथा प्रारम्भ हुन्छ । त्यसपछि १३ वर्षको भुमिकामा छु अनि २२ वर्षको उमेरबाट शुभेच्छा थापाको इन्ट्रि हुन्छ र ४५ वर्षको उमेरमा पुगेर कथा सकिन्छ ।
मिस नेपालबाट के अपेक्षा गर्नुभाको छ ?
मिस नेपाल नामैले एउटा चुनौतिपुर्ण छ । नेपाली सन्दर्भमा मैले मिस नेपाललाई जुन किसिमले प्रस्तुत गरेको छु त्यसप्रति मैले आम दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु । हामी काम नहेरी टिप्पणी गर्न थाल्छौं । त्यो राम्रो हैन ।
मिस नेपाल कहिले रिलिज हुन्छ ?
म छलफल गरिरहेको छु । फागुन १६ मा रिलिज गर्ने कुरा छ । त्यही पनि समय कति अनुकुल हुन्छ त्यही अनुसारमात्र रिलिज हुन्छ । हामीले कति लगानी गरेर चलचित्र निर्माण गरेका हुन्छौं तर त्यसलाई अरुले गंभिर भएर सोचिदिन्नन् दुख लाग्छ ।
मिस नेपालमा कति लगानी गर्नुभाको छ ?
मलाई अन्य साथी तथा शुभचिन्तकहरुले पनि सहयोग गर्नुभाको छ । खासै धेरै त हैन त्यही पनि नर्मल्ली मैले ३० लाख पब्लिसिटि वेगरनै लगानी गरेको छु ।
तपाईले २५ वटाभन्दा बढि चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नुभाको छ तर पनि जम्न सक्नुभाको छैन किन ?
त्यही त दुखको कुरा छ । अरुलाई जस्तो मलाई पब्लिसिटिमा ल्याइएन ।
कसले ल्याउनुपर्ने ?
निर्माताले । तर मलाई किन हो अरु कलाकार जसरी उहांहरुले पब्लिसिटि गर्नुभएन यसको मतलब मलाई हाइड गरियो ।
कस्ता कलाकारलाई पब्लिसिटि गर्छन त प्रड्युसरले चाहीं ?
प्राड्युसरको कुरा हो । उहांहरुलाई मन परेका कलाकारलाईमात्र प्रोमोट गर्नुहुन्छ । तर मलाई चाहीं अहिले मैले जति मेहनत गरें त्यो अनुसार मलाई पब्लिसिटि नगरिएको प्रति अत्यन्त दुख र पश्चाताप लाग्छ ।